သက်တန့်ချို: ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်တွေကို စွန့်ပစ်ကြဖို့အချိန်တန်ပြီ
Totally agree to ur idea.
thu June 7, 2012 at 12:53 PM
သာယာလှပတဲ့ တောင်ကုတ်မြို.လေးမှာ ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်မှာ သေဆုံးသူတွေအတွက် တကယ်ဘဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာ အနေနဲ.သိစေချင်တာကတော့ လူသတ်သမားတိုင်းက အစီအစဉ်တကျ နဲ. လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လူယုတ်မာတွေမဟုတ်တာဘဲ။ ဒီလိုပြောလို. တောင်ကုတ်က ဖြစ်ရပ်ကို လက်ခံအားပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ. ရင်ထဲကို လည်း တစ်ချက်လောက်ဝင်ခံစားကြည့်ပါ။ မူဆလင်ကုလားတွေက ရခိုင်ရွာလုံးကျွတ်သတ်ပြီး မီးရှို. ဖျက်ဆီး ခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ။ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့် ရေမြေမှာနေပြီး လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ. ဘ၀တွေ ၊ ရခိုင်ပြည်မြေပုံမှာ တိုင်းရင်းသားကို ရိုဟင်ဂျာလို. ရေးတဲ့အခါခံစားရတာတွေ ကျွန်တော်က စာကို စိတ်ဝင်စားအောင်မရေးတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒေါသကြီးပြီး အမှားလုပ်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ. ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို လျစ်လျူရှု အပြစ်တင် နေရအောင် ပစ်မထားပါနဲ. ။ အပြစ်တင်နေမယ့် အစား ဘယ်လိုကူညီပြီးဆက်လျှောက် မလဲ။ အခြေခံပြည်သူတွေက ဘ၀ကို ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်ကြတာပါ။ ဒါက ကျွန်တော့် တစ်ယောက်တည်းရဲ. အမြင်လေးပါ။
ဒါကတော့ ငယ်ရွယ်တဲ့ ရခိုင်သူလေးတစ်ယောက်ရဲ. ခံစားချက်အမြင်ပါ။
ဝေမိုးနိုင်(မုံရွာ) June 7, 2012 at 1:57 PM
ဒီလို မျှမျှတတမြင်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ များများပေါ်ထွက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
Sky Angel June 7, 2012 at 2:42 PM
အလွမ်းမြို့ June 7, 2012 at 5:11 PM
တန`င်္လာကိုကို June 7, 2012 at 6:00 PM
Anonymous ပြောတာလေးကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေက
ကျကျရှင်းပြသွားတာကြိုက်တယ်။ comment တခုမှာသူ.လူမျိုးတစ်ဦး
"သူမကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်မကောင်းပါ" ထက်သာတဲ. "သူမကောင်းလျှင်လည်းကျွန်ုပ်တို.ကောင်းအောင်ကြိုးစားပါမည်"
အပါ June 7, 2012 at 8:05 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်တစ်ခုလို့ပဲ ကွန်မန့်ပေးပါရစေ။
ချစ်စံအိမ် June 7, 2012 at 11:00 PM
Anonymous June 8, 2012 at 2:04 PM
ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။ ကျမမြင်တွေ့ခဲ့ရသလောက်ဆိုရင် မြန်မာ မိုစ်လင်မ် တွေဟာ အမြဲတမ်း ဖိနိမ့်မှုတွေကိုခံစားနေရတာကိုပါဘဲ။
မိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက် တိုင်းတပါးမှာနေရတဲ့ခံစားချက်က သူတို့အတွက်
အမြဲတမ်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကမွေးလာတဲ့ လူတွေဟာ ဘာနိုင်ငံသားဖြစ်မလဲ။ တကယ်လို့ သူတို့တွေကို မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်သွားပါလို့ပြောခဲ့ရင် သူတို့ ဘယ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရမလဲ။ ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့ မြန်မာ မိုစ်လင်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါ။ မြန်မာမိုစ်လင်မ်တွေ ဘယ်လောက်ထိဖိနိမ့်ခံခဲ့ရသလဲဆိုရင် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လေးတခုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဘာသာခြားကုလား လုံးဝလုံးဝ မဝင်ရဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကို ကရင်ပြည်နယ် မြိုင်ကြီးငူရွာထိပ်မှာတင်ထားတာ အားလုံးသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မတော်တဆ မိုစ်လင်မ်တစ်ဦးဦးက ဝင်သွားမိခဲ့ရင် တိရိတ်ဆန်တစ်ကောင်လို ရိုက်နက်ပြုမူကြပါတယ်။ အခုလိုပြုလုတ်သူတွေက ဗုဒဘာသာတွေပါ။ ဒါကိုဘယ်လိုပြောကြမလဲ။ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ ဒီလိုမပြုအမူမျိုးတွေကရှိနေသင့်ပါသလား။ မေးချင်ပါတယ်။ မိုစ်လင်တိုင်း အုကမ်းဖက်တွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့ ကိုသက်တန့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အုကမ်းဖက်သူတိုင်း မိုစ်လင်မ်လို့ပြောသွားတာကိုတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ အုကမ်းဖက်နေုကတဲ့ သူတိုင်းဟာ မိုစ်လင်မ်တွေကြီးဘဲလား။ အုကမ်းဖက်သူတိုင်း မိုစ်လင်မ်တွေဘဲ ဆိုတဲ့စကားကို လုံးဝကန့်ကွက်ပါတယ်။ မြန်မာ မိုစ်လင်မ် တစ်ဦး
Anonymous June 9, 2012 at 10:17 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ..ကိုသက်တန့်ရဲ့ အမြင်ကိုထောက်ခံပါတယ်..
yan June 10, 2012 at 2:33 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါလေးပါ ကိုသက်တန့်ချိူ ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးတယ်ဗျ
အတွေးတွေ ထပ်တူညီပါတယ် I like this POST !
ရွှေမြို့သူ June 18, 2012 at 3:24 AM
အမြင်ချင်း ထပ်တူပါပဲ ဆရာသက်တန့်ချိုရေ
နေရာတကာမှာ ကြီးစိုးလာတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ နေရာတကာပျံ့ပွားလာတဲ့အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်မှုတွေကြောင့်တော့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေမှာ အရောင်တွေစွန်းထင်းခဲ့တာတော့သေချာတယ်
Law Ka February 18, 2013 at 12:11 PM
ကဲဗျာ ... ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်ယူဆချက် ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့ ဖြစ်နေတာတွေအတွက် ပြောမပြတတ်တာတွေ အတွက် ကျေနပ်လောက်တဲ့ အဖြေရသွားပါပြီ။ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါရစေ ကျွန်တော်အသက် (၂၇) နှစ်ရှိပါပြီ အခုကျွန်တော် မလေးရှားမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် မိသားစု အိမ်လေးမှာ (၂) နှစ်လောက်နေခဲ့ဖူး ပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ အစ္စလာမ် ဘော်ဒါတွေနဲ့ အခု အတူ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် အမေဘက် က မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အဖေဘက်က ကရင် ခရစ်ယာန်ပါ။ ငယ်ငယ်ထဲက ဘာသာနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ အမေ့ဖက်ကိုလိုက်ပြီ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်ကို လျှောက် ဖို့ လွန်ခဲ့ တဲ့ (၃) နှစ်လောက်ကမှ ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်ရဲ့ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ စာအုပ်ကို မထင်မှတ်ပဲ ဖတ်ပြီး အသိအမြင်တွေ တော်တော် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ အစက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ် ကို မာနကြီးခဲ့တာတွေ အခြားဘာသာဝင် တွေ ပေါ် အထင်သေးခဲ့တာတွေ တစ်စ တစ်စ ပျောက်လာလိုက်တာ ... အခုတော့ အရာရာအားလုံးကို မခံချင်လဲ တရားနဲ့ ဖြေတတ်တဲ့ အကျင့်ရသွားပါပြီ ငြိမ်းချမ်းပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်အဖြစ်နဲ့ အယူလွဲနေ တိမ်းနေတာတွေကိုလဲ တစ်စ တစ်စ ပိုသိလာပါတယ်။ တကယ် အဖိုးတန်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟာ လူမျိုးဘာသာ မရွေး သတ္တ၀ါမရွေးတဲ့ စင်္ကြာဝဋ္ဌာရဲ့ အမှန်တရားဖြစ် ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အပြစ်မပြောပါဘူး ရုပ်၊နာမ် နှစ်ပါး ကိလေသာတရားများကိုသာ (အပြစ်မတင်ပဲ) သတိပဌန်မြဲ ဖြစ်စဉ်၊ ပျက်စဉ်ကို ရှုရမှာပါ။ ဒါကလွဲရင် ဘာအယူဝါဒ ကောင်းမှူ*၊ မကောင်းမှု၊ ရယူခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်း၊ လက်စားချေခြင်း၊ အမျိုးဂုဏ်မောက်ခြင်း ဘာမှမမြဲ သံသရာမလွတ်နိုင်သော အကြောင်း တရားများပဲ။ သို့သော် ၀ိနည်းကိုဂရုမစိုက် လောကီကိစ္စများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသော အချို့ အချို့သော အကြောင်းများရှိတဲ့ အခုကာလကြီးမှာ လူစစ်စစ်တွေ အနေဖြင့် လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ အင်မတန်ကြီးထွားနေတာ .... အပြစ် တင်စရာမဟုတ် သံဝေဂ ယူစရာ ကြောက်တတ်စရာ တရားဖြင့်ဥပေက္ခာပြုစရာ ကိုယ်တိုင်လဲ မမှားခင် မပါခင် လေ့လာကြိုးစားအားထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ အားထားရာ "၀ိပ္ပဿနာ" ပါ။ အဲဒါလေးသာ လူမျိုးဘာသာမ ရွေး အားထုတ်နိုင်ကြမယ် လေ့လာနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ညီညွတ်ရေး တရားမျှတရေးဟာ မတောင်းပဲ ရမှာ သစ္စာပါ။ ........ လေးစားစွာဖြင့်။ ( ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး Facebook က Islam Virus page မှာ ကွန်မန့် ၀င်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အစ္စလာမ် များက မနေနိုင်လို့ ၀င်ရေးထားတဲ့ comment များကို အများ ပြည်သူ ဆဲနိုင်ဖို့ မဖျက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် မျှတစွာရေးထားတဲ့ ကွန်မန့် နှစ်ခုကိုတော့ တစ်ရက်တောင်မခံ ဖျက်ပစ် လိုက်ပါတယ် ဘယ်သူများLikeလုပ်ထားမလဲ လို့ ၀င်ကြည့်တော့မရှိတော့ပါဘူး :D) (ပြီးတော့လက်တွေ့အနေနဲ့ အခု လို မျှတတဲ့ အမြင်များကို သူငယ်ချင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များကို ရင်ဖွင့်မိရင် ဆယ်ယောက်မှာ ၅ ယောက် လက်မခံ ၄ယောက် မငြင်း ၁ယောက် ထောက်ခံပါကြောင်း သတင်းပါးအပ်ပါတယ် လေရှည်သွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်နော်။)
Law Ka February 18, 2013 at 12:12 PM
Law Ka February 18, 2013 at 12:28 PM
လောကကြီးမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး နေ့နဲ့ည အနိမ့်အမြင့် ရှိပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ အကောင်းချည်းပဲ မလာသလို အဆိုးချည်းပဲ လဲ မလာပါဘူး၊ နေ့ချည်းပဲ မရှိသလို ညချည်းပဲလဲ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ လောကပါလ တရားပါပဲ။ နေ့ကြောင့် ညဖြစ်ပြီး ညကြောင့်နေ့ဖြစ်လာတာပါ။ ကောင်းမှုကြောင့် မကောင်းမှုဖြစ်ပြီး မကောင်းမှုကြောင့် ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြောရင်ရှုပ်မယ်ထင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ "၀ိပ္ပဿနာ" ပါ။ ကောင်းမှု မကောင်းမှု အား လုံးကို လွှတ်ပြီး စပ်ကြားမှ သံသရာ ကနေ လွတ်အောင် အားထုတ်ကြရမှာ အားလုံးတာဝန်ပါ။ လေးစားစွာဖြင့် ....။